Axmad – Page 3 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Axmad 766 posts 1 comments
Aala-Sucuud oo saddex maalmood lagu amray inuu kaga guuro gobol kamid ah Yaman.
Axmad	 Jun 12, 2019 0
Al-muhra oo kamid ah gobol kamid ah wadanka Yaman, islamarkaana xiga dhanka xuduud beenaadka Yaman iyo Cummaan, ayaa dadka degan waxay ciidamada maamulka Aala-sucuud u qabteen in muda saddex maalmood ah uga guuraan guud ahaan gobolka.…
Bulshada Muqdisho oo Buux Dhaafiyay Xabsiga Xamar Loona Furtay Mid Kale!!
Axmad	 Jun 11, 2019 0
Taariikhda inta la og yahay ma dhicin inuu buuxsamo xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho oo qaada kumannaan qof, balse xilliga wuxuu buux dhaafay sidii loogu xirayay bulshada magaalada Muqdisho. Kulan saxaafadda loogu yeeray oo shalay ka…
Inkabadan 20 ruux oo ku dhintay duqeymo Ruushku ka fuliyay Suuriya.
Saacadihii lasoo dhaafay, diyaaradaha dowladda Ruushka iyo kuwa nidaamka Bashaar Al-asad ayaa duqeymo xoogan ka fuliyey deegaanno iyo magaalooyin dhaca wuqooyiga Suuriya, halkaas oo ay ku geeriyoodeen dad shacab ah. Wararka ka imaanaya…
Dhul Beereed Badan oo Jowhar Dhaca oo Xashiish Lagu Beeray.
Duullaanka Soomaaliya ku socda waxaa qeyb ka ahan la dagaalanka horumarka iyo doorinta dhaqanka wanaagsan iyo akhlaaqda. Soomaaliya waxaa ka jira NGO-yo qandaraas kusoo qaatay xaalufinta dhirta iyo nabaad guurinta dhulka kuwaasoo…
Aqoonyahannada Soomaaliyeed ee ku nool wadanka ayaa ka hadlay galaan galka dowladda Ingiriiska ay ku leedahay wadanka Soomaaliya, gaar ahaan ciidamada Soomaalida ee ay tabaraneyso. Dr Xanafi Cabdi Sheekh Aadan oo waraysi siiyay…
Dagaallo culus oo lagu qaaday Shisheeyaha jooga Qoryoolay.
Ciidamo aad u hubeysan oo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa dagaallo culus ku qaaday difaacyada askarta Shisheeyaha iyo kuwa dowladda ay ku leeyihiin degmada Qoryoolay ee gobolka Shabeellaha hoose. Dagaalka oo ahaa mid aad…
Axmad	 Jun 10, 2019 0
Dhuuxa Waraysiyada, waa barnaamij muhiim ah oo lagu soo gudbiyo waraysiyo iyo falanqeyno xiiso badan oo ka hadlaya xaaladda dalka iyo dibadda, Halkan ka dhagayso Barnaamijka Dhuuxa wareysiyada 10 06 2019.lite
Dhagayso Qiso xanuun badan: Waxaan ka codsaday iney i dilaan.
Mihrigal Tursan waa haweeney muslimad ah oo kasoo jeeda dhulka Turkistaanta bari ee ku jira gumeysiga dowladda Shiinaha, sanado jirdil iyo tacdiibin ah kadib waxay ku guuleystay iney kasoo baxsato halkaas, oo ay soo gaarto wadamada reer…
Laba Gudoomiye Gobol oo Qaadacay Xilka Qaadis Lagu Sameeyay.
Gudoomiyahaasha Mudug iyo Hiiraan, qeybta maamullada Hirshabelle iyo Galmudug ayaa si toos ah u qaadacay xil ka qaadis lagu sameeyay shalay iyo dorraad. Yuusuf Axmad Hagar (Yuusuf Dabageed) ayaa waxa uu si toos ah gaashaanka ugu…
Shil Khasaare Dhaliyay oo Ka Dhacay Gobolka Qorraxay.
Wararka ka imaanaya dhulka Soomaali Galbeed ee ay Xabashidu gumeysiga ku heysato ayaa waxay sheegayaan in shil gaari oo ka dhacay magaalo hoos timaada gobolkaas, kaasoo sababay khasaare soo gaaray inta badan dadkii rakaabka ahaa. Gaari…